Jiraattota Dambidoolloo: Humni waraanaa mootummaa nu dararaa jira - BBC News Afaan Oromoo
Jiraattota Dambidoolloo: Humni waraanaa mootummaa nu dararaa jira
Goodayyaa suuraa 'Humni waraanaa mootummaa nu dararaa jira'
Humni waraanaa magaala Dambidoolloo keessa bobba'e 'Abbaa Torbee' fidaa jechuun nama arge reebaafi ari'aa jira jechuun jiraattonni komatan. Halkanis dhukaasni dhagahamaa akka bulu dubbatu.
'Abbaa Torbeen' yeroo dhihoo asitti garee dhoksaan of gurmeessaniin miseensota qaama mootummaa tahan irratti haleellaa raawwatamaa jirudha.
Guyyoota sadiif walitti aansuun halkan halkan loltoonni mootummaa Abbaa Torbee fidaa jechuun magaalaa Dambidoolloo keessaa dhukaasaa bulu jedhan jiraattonni magaalitti dubbisne tokko tokko. Mootummaan humna waraanaa bobbaasuu himeera.
Jiraataan magaalittii maqaansaanii akka dhahamu hin feene tokko BBCtti akka himanitti, galgala sa'aatii 12 booda keessumaa sa'aatii afuriifi shan keessa dhukaasni akka malee waan dhagahamuuf, uummanni yaaddoo guddaa keessa jira jedhan.
''Rakkoo nageenyaa Lixa Oromiyaa harka keessaa hinqabnu''
Humni waraanaa mootummaan magaalaa keessa bobbaase nama karaarra deemu reebuufi dhiphisuurraa kan ka'e namni akka fedhe gadi bahuu hin danda'u jedhan.
Sababiin reebicha kanaa maali kan jedhuuf nuyi guutummaasaa beekuu baannus Abbaa Torbee fidaa isintu nyaachisa isin keessa taa'ee nurratti dhukaasa jechuun nama argan hundaa dararu jedhan.
Loltootni ABO naannoo magaalaa akka jiran ni odeeffama garuu gara isaanii deemanii waraana banuurra magaala keessa gara uummataatti deebi'an jedhan.
Daandii Finfinneerraan gara Dambidoolloo fidu irratti qaama hin beekamneen poolisoonni waan miidhamaniif gara magaalaatti dhufanii akka ijaa bahumsaatti Abbaa Torbee fidaa jedhanii dhiphina kana uuman jedhan.
Uummata gabaaf bahellee akka tasgabaa'ee bitee hin gurguratiin gochuun akka biitinnaa'u taasisan jedhan.
Humni waraanaa kun osoo namoota daandiirraa ari'anii, baqatanii Baankii Awaash magaalicha keessa jiru keessa gallaan, achitti maal godhan? Maaliif akkas reebdu? jedhee yommuu waardiyichi dubbatu maaltu si galche jechuun rasaasaan rukutanii jedhan.
Jiraataan biraa dubbisnes bakka Iyyesuusii jedhamutti qaamni hin beekamne tokko boombii waan isaanitti darbatee miidheef uummatatu qaama kana beeka jechuun rakkinichi akka hammaatu taasise jedhan.
Qaamni eenyummaansaa hin beekamnes uummata keessa goree waan isaan rukutuuf qaama isaan miidhaa jiruufi saba adda baasanii ilaaluurra uummata dararaa jiru jedhe.
Sa'aatii 11 booda namni tokko gadi baanaan akkasumatti hin dhiisani, sababnisaas namni uummata keessa dahatee nu miidhuuf socho'u jira jedhanii waan of sodaataniif jedhe.
Ministirri Muummee iddoowwan rakkoon nageenyaa jirutti humna waraanaa gidduu galee tasgabbeessuu akka qabu ibsa kennaniiru.
Yeroo dhiyootiin as rakkoon nageenyaa Lixa Oromiyaa godinaalee Wallagga Lixaafi Qeellam Wallagaa keessatti uumamaa tureera.
Deebii Raayyaa Ittisa Biyyaa
Kana hordofee Mootummaan Federaalaa Raayyaa Ittisa biyyaafi Poolisii Federaalaa gara Qeellam Wallaggaatti bobbaasuu Ministirri Humna Ittisa Federaalaa Obbo Mootummaa Maqaasaa himaniiru.
Daandii cufuu, boombii darbachuufi uummatni yaaddoon akka jiraatu haalotni taasisan naannicha keessa jiraachuu fi itti fufinsaan tasgabbaa'uu dhabuusaa hordofee mootummaan murtoo kana fudhachuu himaniiru.
Humni waraanaa kun osoo gara magaalaa Dambidoollootti imalaa jiruus qaama eenyummaansaa hin beekamneen miidhaa'aan irra qaqqabuu himaniiru.
Humni waraanaa kun eenyuun rukutuuf bobba'e gaaffii jedhus ammaaf qaamni naannicha keessa socho'u eenyuu akka tahe adda baasuuf hojjechaa jirra jedhan.
Loltootni ABO naannicha jiru shakkii jedhu jiraattota dubbisne irraa dhgeenyus, humni waraanaa kun tarii isaanirratti bobba'ee laata kan jedhuuf,Obbo Mootummaan dhaabni uummata Oromoof qabsaa'u karaa nagaa deemuu akka qabu nan amana, garuu ABO'n waraana dhaabeera waan jedheef adda baasuuf hojjechaa jirra jedhan.
Oppireeshiniin kun karaa waraanaa itti fufamoo qorannoodhaan adda baha kan jedhus karaa lamaanuu deemuun furmaata dabalataan hojiin siyaasaas ni hojjetama jedhan.
Uummata waliin taane nageenyasaani kabachiisuf hojiin hojjetamus itti fufa jedhan.
Jiraattotni garuu humni waraanaa kun yaaddoo nageenyaa keessa nu galcheera waan uummatni hin beekne fidaa jedhanii dhiphisu gaaffii jedhus Obbo Mootummaan akkataa heeraa fi danbii biyyittiitti, humni waraanaa kun yeroo dhimmoota kanneen irratti bobba'u of eeggannoo guddaa fi bifa nageenya uummataa hin booressineen tahuu akka qabu kallattiin kennameera jedhan.